San Diego neBritish Columbia ikozvino vaine ruzivo nezve ruzhinji rwekufambisa | IPhone nhau
San Diego neBritish Columbia iye zvino vane ruzivo pamusoro pekutakura kwevanhu
Iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakawedzera zvakare basa reruzivo munzira dzevoruzhinji dzekutakura mune yayo Mapu kunyorera. Asi ikozvino kunze kweMexico City, hatisati tawana rimwe guta rinotaura chiSpanish. Tichafanirwa kumirira kuti tione kana paine kuvhurwa kweIOS 10, Apple inotipa chero yakanaka nhau mune izvi.
Nezuro paminiti yekupedzisira, vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa nyowani yekuvandudza yeApple Mepu kuwedzera San Diego neBritish Columbia pakati pemaguta matsva kwaunogona kutarisa nzira dzevoruzhinji kutenderera guta usingashandise tekisi kana kurendesa mota.
Nezve guta reSan Diego, Apple yakawedzera ruzivo nezve mota yemumugwagwa iyo inopfuura nemuguta rakawanda pamwe nenzira dzakasiyana dzekutakura vanhu dziripo. MuBritish Columbia, iri kumadokero kweCanada, pamusoro penzira dzemabhazi Apple yakawedzerawo ruzivo nezve njanji SkyTrain, yechitima-inomhanya chitima yakafanana neMetro, asi kusiyana neiyi, haina mutyairi.
Parizvino ruzivo rwekufambisa kweruzhinji rweApple rwunowanikwa mumaguta mashoma, mazhinji ari muUnited States, chimwe chinhu chine musoro kana tichifunga nezvekuti kambani yekuAmerica inogara ichiita sekukoshesa basa rayo munyika yaro. Imwe nyika yakatarisa kufarira kwaApple mukuwedzera ruzivo rwekufambisa veruzhinji iChina, uko kubvira kubvira payakatangwa, tinogona kuwana ruzivo urwu mumaguta anopfuura makumi matatu, akakosha kwazvo munyika. Nekudaro, muEurope, tinogona chete kuwana ruzivo urwu muLondon neBerlin.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » San Diego neBritish Columbia iye zvino vane ruzivo pamusoro pekutakura kwevanhu
Infojobs inovandudzwa uye inogamuchira yakakosha kugadzirisa
Vanhu vatanhatu vakasungwa muChicago nekuba kubva kumaApple Stores akati wandei